Kitra – «Mondial 2018» : hijery lalao roa any Rosia i Gilbert sy i Niaina | NewsMada
Kitra – «Mondial 2018» : hijery lalao roa any Rosia i Gilbert sy i Niaina
Hampiaina ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany “Mondial 2018”, taranja baolina kitra, ao anatin’ny fahafinaretana ny orinasa Star sy ny zava-pisotro coca-cola. Natolotra ireo tsara vintana ihany koa ny loka hijerena baolina any Rosia.
Afaka roa andro dia iaina ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany amin’ny baolina kitra, izao tontolo izao. Fihaonana, hotanterahina any Rosia, manomboka ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay, ho avy izao. Anisan’ireo hanaraka sy ianoka ao anatin’izany fetiben’ny baolina kitra izany koa ny vahoaka malagasy, miaraka amin’ny coca-cola. Hisy Malagasy roa, hanatrika ireo fihaonana mivantana any an-toerana. Natolotra azy ireo, omaly tetsy Andraharo ny tapakila sy ny fivahinianana, any Rosia. Nambaran’ny tomponandraikitra fa lalao nampanaovina ho an’ireo mpiara-miombonantoka amin’ny orinasa Star, izy ity. Anisan’ireo, tsara vintana ka nahazo izany, Rakotondramanana Gilbert avy eto Antananarivo. “Marihiko aloha, fa izaho dia tena mpankafy baolina kitra ary efa mpilalao fahiny. Misaotra ny orinasa star sy ny coca-cola ny tenako, amin’izao nahazoako ny loka hijerena “Mondial” izao. Faly aho fa hijery mivantana ireo mpilalao kalaza. Faniriako ny hahita ny lalaon’i Arzantina sy i Brezila”, hoy izy. Ny tapakila faharoa, nomena an-dRakotomalala Niaina Harivony, avy any Mahajanga. Marihina fa lalao roa no hojeren’izy mirahalahy ireo, any an-toerana. Tsy mbola voafaritra kosa nefa ireo fihaonana, hatrehiny, amin’ity “Mondial 2018”, ity.
Loka 25.000 hozaraina
Ankoatra izay, hisy fanentanana, amin’ny toeram-pivarotana lehibe maro sy any anaty fiara fitaterana ary eny amin’ny tombin-dasantsy, eto Antananarivo sy any amin’ireo faritra sasany, ho an’ity “Mondial 2018” ity, miaraka amin’ny coca-cola. Hisy lalao isan-karazany, ho an’ireo mpanjifa, toy ny fifaninanana mamitaka, ny lalao amin’ny solosaina, ary ny “jeux prognostics” sy ny hafa. Loka 25.000 no hozaraina mandritra izany, ao anatin’ity iray volana, iainana ny “Mondial 2018” ity.
Ankoatra izay, hisy koa fandefasana ireo lalao any amin’ny toeram-pisakafoana, mpiara-miombonantoka, amin’ny coca-cola. Marihina fa zava-pisotro, nanohana sy niaraka tamin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), nanomboka ny taona 1974, ny coca-cola.